सम्पर्क पछि महिलाले सोच्ने महत्वपूर्ण १२ कुरा « हाम्रो ईकोनोमी
सम्पर्क पछि महिलाले सोच्ने महत्वपूर्ण १२ कुरा
शारीरिक सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पार्टनरसँग मात्र शारीरिक सम्पर्क राख्न रुचाउँछन् । शारीरिक सम्बन्धले महिला र पुरुषविचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने शारीरिक सम्पर्क पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । शारीरिक सम्पर्क पछि महिलाहरूले आफ्नो पुरुष साथी र आफूबारे कस्ता कुराहरू सोच्न सक्छन् ?
हेर्नुहोस् शारीरिक सम्पर्क पछि महिलाहरूले सोच्ने कुराहरू – आनन्द र सन्तुष्टीबीच फरक-किंसले इन्स्टिच्यूटले गरेको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै कण्डम नलगाइ शारीरिक सम्पर्क गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी कण्डम लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो । विस्तारै गरेको राम्रो-शारीरिक क्रिडाका लागि हतारिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना संवेदनशील कोमल अंगमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेदनशील अंगसँग संवेदनशीलरुपमै प्रस्तुत भएको उनीहरुलाई मन पर्छ ।
रक्सी सेवन गर्ने चाहना-शारीरिक सम्पर्क पछि केही महिलालाई रक्सी सेवन गर्ने मन पनि हुन्छ । त्यो बेला उनलाई रक्सीले आफूलाई फाइदा गर्छ वा गर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । भोक लाग्नु-शारीरिक सम्पर्कका क्रममा शक्ति खर्च हुन्छ । यसकारण तपाइको जोडीले भोक लागेको महशुस गरेका हुन्छ । तपाईप्रति सकारात्मक-यदि शारीरिक सम्पर्कका क्रममा तपाइले जोडीलाई सन्तुष्टी दिन सक्नुभयो भने उनले शारीरिक सम्पर्क पछि तपाइप्रति सकारात्मक सोच्न थाल्छिन् । चाहे उनले यसको संकेत दिन पनि सक्छिन्, नदिन पनि सक्छिन् ।
उसले गर्ने मायामा फरक त पर्दैन-कैयौं पटक महिलाहरुलाई शारीरिक सम्पर्कपछि आफ्नो जोडीले पहिलेको जस्तै माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा दुविधा हुन्छ । यस्तो विषयले महिलाहरुलाई बढी सोच्न बाध्य बनाउँछ । कतै मैले यो गलत त गरिन-यदि कुनै महिला आफ्नो श्रीमान वा ब्वाइफ्रण्डलाई धोका दिएर अन्य कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छिन् भने उनलाई आफूले यो के गरेको भन्ने मनमा खेल्ने गर्छ । उनलाई पछि आफूले यस्तो गर्न नसक्ने सोच्छिन् । शारीरिक सम्पर्क एक काम-कुनै महिला शारीरिक सम्पर्कलाई एक महत्वपूर्णका कार्यका रुपमा लिन्छिन् । जुन पुरा हुने वित्तिकै आफ्नो अर्को काममा लाग्ने गर्छिन् ।
शारीरिक सम्पर्क गरेकोमा विश्वास नलाग्नु-कयौं पटक महिलाहरुलाई आफूले कसैसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको कुरा पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ । यस्तो दुइवटा परिस्थितीमा हुन सक्छ । पहिलो, जब शारीरिक सम्पर्क गर्ने व्यक्ति पहिलो पटक शारीरिक सम्पर्क गरिरहेका छन् र दोस्रो, जब महिला जोडीलाई आशा गरे विपरित सम्पर्क भएमा । के म उनको लागि ठीक थिएँ-शारीरिक सम्पर्कपछि कतिपय महिलाको मनमा आफू आफ्नो जोडीको लागि ठीक थिएँ त भन्ने कुरा पनि मनमा लाग्ने गर्छ । उनी आफूसँगको सम्पर्कबाट आफ्नो जोडी सन्तुष्ट भयो वा भएन भन्ने बारेमा पनि जान्न चाहन्छिन् ।
दोस्रो पटक पनि गर्न सक्छौं-कुनै बेला महिलाहरु शारीरिक सम्पर्कबाट यति धेरै सन्तुष्ट हुन्छिन कि उनी अर्को पटकका लागि पनि तुरुन्तै तयार हुन्छिन् । त्यसका लागि आफ्नो जोडीको मन तान्न थाल्छिन् । समय अभाव भएको महशुस-महिला जोडीलाई शारीरिक सम्पर्कका क्रममा समयलाई लिएर तपाइप्रति निकै अपेक्षा हुन्छ । उनले तपाइलाई खरो रुपमा उत्रेको देख्न चाहन्छिन् । नभए उनी निराश समेत हुन्छिन् ।
हदै सम्म प्रेम गर्छन् यी पाँच राशि भएका मानिसहरू ! जान्नुहोस्
यो संसारका हरेक व्यक्ति एकजस्ता हुँदैनन् । कसैमा केही कुरा विशेष
विस्तार हुने भो कलंकी–महाराजगञ्ज सडक
काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । मार्चको
एउटै गोत्रका महिला र पुरुषले विवाह गर्नु किन हुँदैन ? यस्तो छ कारण
हिन्दू धर्मले सहगोत्रीका बीच विवाह गर्न नहुने विधान गरेको छ । गोत्र
हेर्नुहोस् तीन चर्चित हास्यकलाकारका श्रीमती, को कति राम्रा ?
अहिले नेपालका चर्चित हास्यकलाकारहरू दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे माग्नेबुढा श्रीमतीसहित
हदै सम्म प्रेम गर्छन् यी पाँच राशि भएका मानिसहरू !…
भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता प्रदेश सरकारको लक्ष्य–मुख्यमन्त्री पौडेल
अस्पतालबाट फर्किएपछि ओलीले बोलाए पहिलो क्याबिनेट बैठक
प्रेम बहादुर आले बनमन्त्री बन्दै